स्थानीय तहमा इशाई धर्मावलम्बीः हेटौंडामा मेयरदेखि क–कसले जिते चुनाव ? - Nepal Face
जब–जब चुनाव आउँछ, तब–तब खोजिन्छ– कहाँ, कुन समुदायका कति बासिन्दा छन् ? अर्थात्, उम्मेदवार जुन समुदायको हुन्छ, त्यसका आधारमा कसका मतदाता कहाँ र कति छन् ? यसको खोजी तीव्र हुने गरेको छ ।
बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा पनि यस्तो हिसाब भयो । जितेका र हारेका दुबै पक्षले आ–आफ्ना समुदायबाट दिएको साथ वा असहयोग गरेको हिसाब पनि निकालिरहेका छन् । तर, सार्वजनिक रुपमा त्यति धेरै प्रकट नहुने एउटा ‘निर्णायक’ समुदायबारे अन्य समुदायको तुलनामा त्यति धेरै चर्चा गरिँदैन । त्यो हो, क्रिस्चियन धर्मावलम्बी ।
नेपाली समाजमा आदिकालदेखि नै हिन्दू, बौद्ध, किराँत, मुस्लिम, दशनामीजस्ता धार्मिक समुदायका पर्व, जात्रा तथा उत्सवहरु मनाइँदै आएकोमा पछिल्लो दुई दशक यता विभिन्न धर्म परिवर्तन गरी पश्चिमाहरुले बढी विश्वास गर्ने क्रिस्चियन, अर्थात् इशाई धर्म अंगाल्नेहरुको संख्या निकै बढेको छ ।
यो धर्मका अनुयायी वा अनुशरक बढेको तुलनामा राज्यले समावेशिताका लागि अन्य जाति, भाषा, धर्म, लिंग र सम्प्रदायका लागि आरक्षण तोकेजस्तो कुनै अलग्गै व्यवस्था गरेको छैन । तर, जब चुनाव आउँछ तब राजनीतिक दलहरु इशाई समुदायहरुको खोजी कार्यमा लाग्न थाल्छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा परिवार दलका एकनाथ ढकाल इशाई धर्मावलम्बी भएको चर्चा हुने गरेको छ । तर, अभियन्ता कुवेर गुरुङले ढकाल इशाई नभएको बताएका छन् । कोरियन धर्मगुरुलाई नेपाल ल्याएर नेताहरुलाई होली वाइन खुवाएका कारण ढकालबारे त्यस्तो टिप्पणी गरिए पनि होली वाइनसँग इशाई धर्मको कुनै सम्बन्ध नभएको गुरुङ बताउँछन् ।
यता, एकथरीले ढकाल खुलेर यो धर्म मान्छु भन्न नसकेको तर भित्री रुपमा क्रिस्चियन भएको बताउँदै आएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । उनी विदेशमा भ्रमण गर्ने क्रममा आफू क्रिस्चियन नै भएको दाबी गर्ने गरेको एक इशाई अभियन्ताले उल्लेख गरे ।
नेपालका इशाई धर्मावलम्बीले सामाजिक एकता पार्टी नामक राजनीतिक दल नै स्थापना गरेका छन् । त्यसका अध्यक्ष सीबी गहतराज हुन् ।
क्रिस्चियन समुदायको सबभन्दा बाक्लो उपस्थिति काठमाडौं उपत्यकामा छ । उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लामा दुई लाख भन्दा बढी क्रिस्चियन रहेको उक्त धर्मका अगुवा केशव लुइँटेलको दाबी छ । उपत्यकाभित्र पनि क्रिस्चियन समुदायका मतदाता काठमाडौं जिल्लामा बढी छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लुइँटेलले काठमाडौंमा मात्रै करिब डेढ लाख क्रिस्चियन रहेको बताए । तर, उपत्यकामा भने सो समुदायका कसैले पनि चुनाव जित्न सकेका छैनन् । लुइँटेल आफैँ भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा वडा सदस्यका उम्मेदवार थिए । पराजित भए ।
यस पटकका उम्मेदवारमध्ये काठमाडौं महानगरपालिमा एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितकी पत्नीले पनि उक्त धर्म मान्दै आएको बताइन्छ । तर, स्थापितले उक्त समुदायबाट मत नपाएको एक इशाई अभियन्ताको भनाइ छ ।
उक्त धर्मका अगुवा केशव लुइँटेलले जात, धर्म र सामुदायिक रुपमा भोट दिने कुुरामा आफू विश्वास नगर्ने बताए । पछिल्लो समय धर्मिक समुदायको आधारमा भोट पाउन सकिने जनप्रतिनिधिले आँकलन गर्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘अन्य धर्ममा के हुन्छ थाहा छैन । तर हामीले मान्दै आएको क्रिस्चियन धर्ममा प्रभावकारी र सक्षम व्यक्तिलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । र, त्यसकै आधारमा आफूलाई मन पर्ने व्यक्तिहरुलाई क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरुले यो निर्वाचनमा भोट दिएको पाइन्छ ।‘
कति निर्वाचित भए क्रिस्चियन उम्मेदवार ?
अहिले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिको मेयरमा निर्वाचित एकीकृत समाजवादीकी मीनाकुमारी लामा इशाई धर्मावलम्बी हुन् । उनलाई मेयरमा विजयी बनाउन त्यहाँका आठ हजार क्रिस्चियनमध्ये ६ हजार मतदाताको ठुलो भूमिका रहेको उक्त समुदायका अगुवाहरु बताउँछन् । उनले प्रतिस्पर्धी एमालेका अनन्तप्रसाद पौडेल भन्दा २ हजार १७२ मत बढी ल्याएर मेयर जितेकी हुन् ।
गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित मसली माया थोकर पुन क्रिस्चियन धर्मावलम्बी हुन् । नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित उनले ७ हजार ४५३ मत पाएकी थिइन् ।
चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष पूर्णप्रसाद आचार्य पनि सोही समुदायका हुन् । उनी यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्षमा १ हजार ५०७ मतले विजयी भए ।
तप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिकाका नेपाली काँग्रेसबाट अध्यक्षमा निर्वाचित युक हां विर हांगाम पनि क्रिस्चियन धर्म मान्दै आएका छन् । उनले २ हजार ८६९ मत पाए । एमालेका केदारजंग लिम्बूलाई ९९ मतले पराजित गरेका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्षमा निर्वाचित एमालेका डम्बरबहादुर तामाङ र रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष लाक्पा कामी तामाङ पनि उक्त समुदायका सक्रिय सदस्य हुन् । उनीहरु नेपाली काँग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ३ का वडा सदस्य जितेन्द्र राई, मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष यहुन्ना राईसहित यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरि चार सय भन्दा बढी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले विभिन्न पदमा चुनाव जितेका छन् ।
# इशाई धर्मावलम्बी